Luis Cernuda. Chirangaridzo cherufu rwake. 4 nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
Luis Cernuda akafa munaNovember 5, 1963 muGuta re Mekisiko. Ini ndakaberekerwa mukati Sevilla uye zvaive mumwe wevanonyanya kukosha vadetembi ve Chizvarwa che27. Nhasi ndinomuyeuka achiongorora chimiro chake nebasa rake nekusimbisa 4 yenhetembo dzake.
2.1 Mahombekombe erudo
2.2 Chikonzero chemisodzi
2.3 Ndinoda kuva ndega kumaodzanyemba
2.4 Kunogara kukanganikwa
Akanga achiverengera hama yake Gustavo Adolfo Becquer paakatanga kufarira nhetembo achiri mudiki. Atove mudiki iye akaita zvinyorwa zvake zvekutanga mu Western Magazine uye zvakare takabatana mukati Chokwadi, Midday o Coastal, magazini yeMalaga ye Manuel Altolaguirre. Akanga ari yakakurudzirwa zvakanyanya nemabhuku echiFrench, yeuka kuti mumwe weasekuru nasekuru vake aive chiFrench. MuHondo Yenyika, akaenda kuutapwa kuUnited States, kwaakashanda semudzidzisi, uye gare gare akaenda kuMexico, kwaakafira.
Zvake nhetembo dzekutanga dzakaburitswa muna 1927 pasi pezita rekuti Nhoroondo yemhepo. Muchikamu chayo che vechidiki tine Rwizi, rudo y Mafaro akarambidzwa, dzinoratidza kuomerera kwavo ku surrealism. Mairi kukura zvakakosha Makore, nezve Hondo Yenyika. Yake danho rekupedzisira, yatove muMexico, inosanganisira Kusiyana kwenyaya yeMexico, Rarama usina kurarama y Nemaawa akaverengwa.
Kunge seiri pagungwa
inopfupisa iyo bluish kuda iyo inomuka
kune nyeredzi dzeramangwana,
akaita wave scale
uko tsoka dzamwari dzinodzikira mugomba rakadzikadzika
chimiro chako pachacho,
ngirozi, dhimoni, kurota kweakarota rudo,
inopfupisa mandiri kushuvira kwakambosimudza
kusvikira kumafungu ayo anonyungudika.
Ndichiri kunzwa kupisa kwekuda ikoko,
Ini, anonyanya kuda,
pasina mwenje uchindiona
zvirokwazvo akafa kana mupenyu,
Ndinofungisisa mafungu ayo uye ndinoda kufashama
buruka, sevatumwa avo vari pasi pechikwiriso chekupupa furo,
kusvika kuzasi kwerudo rwusina kumboonekwa nemurume.
Husiku hwekusuwa hauna miganhu.
Mumvuri wake mukupanduka sefuro,
putsai madziro asina kusimba
husiku husingakwanise kuva chero chinhu kunze kwehusiku.
Ko vadikani vanopwanya nyeredzi
pamwe kunakidzwa kunodzima kusuwa.
Asi iwe, husiku, uchityairwa nezvishuwo
kunyangwe kuchena kwemvura,
unogara wakamira wakamirira ndiani anoziva husiku husiku.
Kupfuura kwakadzikadzika kunodedera
yakazara nenyoka pakati peminhenga,
asingatarise chero chinhu kunze kwehusiku
pavanenge vachivhara mhepo pakati pemiromo yavo.
Husiku, husiku hunopenya,
kuti padyo nemakona anomonyanisa chiuno chake,
kumirira, ndiani anoziva,
seni, sevanhu vese.
Ndinoda kuva ndega kumaodzanyemba
Pamwe maziso angu anononoka haachaonizve zasi
yenzvimbo dzakajeka dzakarara mumhepo,
nemitumbi mumumvuri wematavi semaruva
kana kutiza nekumhanya kwemabhiza akatsamwa.
Maodzanyemba igwenga rinochema richiimba,
uye izwi iri haridzimi seshiri yakafa;
akananga kugungwa anotungamira zvishuwo zvake zvinovava
kuvhura echo isina simba iyo inogara zvishoma nezvishoma.
Kumaodzanyemba kure zvakanyanya ndinoda kuvhiringidzika.
Mvura hapana chimwe kunze kwehafu yakavhurika ruva;
mhute yayo chaiyo inoseka, kuseka kuchena mumhepo.
Rima rayo, kupenya kwaro zvakaenzana runako.
Muminda mikuru isina mambakwedza;
Ndangariro yedombo rakavigwa pakati porukato
Pane iyo mhepo inopukunyuka kushaya hope kwake.
Kunobva zita rangu
Kumutumbi unoratidzwa mumawoko emakore,
Pane chishuwo chisipo.
Munzvimbo huru iyi mune rudo, ngirozi inotyisa,
Bapiro rake pachifuva changu,
Kunyemwerera kuzere nenyasha dzemuchadenga sekutambudzwa kuri kukura.
Kwese kunopera kuda uku kunoda muridzi mumufananidzo wake,
Kuendesa hupenyu hwake kune imwe hupenyu,
Hapana kumwe kutenderera kunze kwekutarisana nemaziso.
Iko kusuwa uye mufaro zvisipo kupfuura mazita,
Yedenga denga nenyika zvakakomberedza ndangariro;
Ndekupi kwekupedzisira ndasununguka ndisingazvizive ini,
Yakanyungudutswa mumhute, kusavapo,
Kusavapo zvishoma senyama yemwana.
Ikoko, uko kure;
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Luis Cernuda. Chirangaridzo cherufu rwake. 4 nhetembo